သင်၏လုံခြုံရေးကင်မရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မသိသေးသောအရာ (၅) ခု | Gadget သတင်း
သင်၏လုံခြုံရေးကင်မရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မသိသေးသောအရာ (၅) ခု
Gadget သတင်း | 26/04/2021 10:53 | ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
သင်၏အိမ်၊ စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ရုံးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းအတွက်စောင့်ကြည့်ရေးကင်မရာများနှင့်အတူပါ ၀ င်သောအချက်ပေးစနစ်များရှိသည် အကာအကွယ်ပေးထားသောvariousရိယာများအားထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူများအားအချိန်နှင့်တပြေးညီရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်တည်ရှိဆဲပင် သင်၏လုံခြုံရေးကင်မရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မသိသေးသောအရာများ ပြီးတော့သူတို့ကိုစွယ်စုံသုံးကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပြီ။
2 သင်၏လုံခြုံရေးကင်မရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မသိသေးသောအရာများ
လုံခြုံရေးကင်မရာများကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ကြသည် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်နှင့်ချိတ်ဆက်သောပိတ်ထားသော circuit ကိုဗီဒီယို, အခွင့်အလမ်းရရှိမှုရှိသူများကသာတွေ့မြင်သည် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာဖြစ်ရပ်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီမှတ်တမ်းတင်ရန်၊ မတူကွဲပြားသောထောင့်များမှဓာတ်ပုံများရိုက်ရန်ဖြစ်သည် ၃၆၀ ဒီဂရီအကွာအဝေးအတွင်း၌ပင်ဖြစ်ပျက်သောအရာကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည်ပိုင်ရှင်သည်ခိုးမှုဖြစ်လျှင်တန်ဖိုးရှိသောအထောက်အကူပစ္စည်းများရနိုင်သည်။
သုံးစွဲသူများစွာတွင်စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်ကင်မရာများသည် ၄ ​​င်းတို့နှိုးစက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် Movistar Prosegur နှိုးစက်သူတို့တစ်တွေဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းက သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးကိုအမြဲတမ်းကာကွယ်ရန်အခြေခံအပိုင်းဖြစ်သည်.
Prosegur ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်သင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးစုံပေးနိုင်သည် သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောစောင့်ကြည့်ကင်မရာမော်ဒယ်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်အခန်းကြီးများသို့မဟုတ်အခန်းငယ်များတွင်ရွေ့လျားမှုထောက်လှမ်းမှုကိုသင်လိုအပ်ပါသလား။
သင်၏လုံခြုံရေးကင်မရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မသိသေးသောအရာများ
လုံခြုံရေးကင်မရာများသည်ယနေ့လူကြိုက်များလာပြီးအဆောက်အအုံအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးတွင်အပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုကြသည်။ သင်မသိသေးသောအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သိချင်စိတ်များရှိသည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအတိုင်း
ယခုနှစ်ကာလအတွင်း ဂျာမနီရှိဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရန် ၁၉၆၀ လုံခြုံရေးကင်မရာများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ယင်း၏စနစ်ကို ၀ န်ထမ်းများ၏အသက်အန္တရာယ်ကိုမလိုဘဲဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် Walter Bruch မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုများမှတစ်ဆင့်၎င်းကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အနည်းဆုံးလုံခြုံရေးကင်မရာ ၂၄၅ သန်းရှိပြီးအပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်ခဲ့သည်နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်အင်တာနက်ကိုအလွယ်တကူရရှိခြင်းတို့ကြောင့်ယနေ့လူ ဦး ရေတိုးပွားလာသည်မှာသေချာသည်။
သင် ATM ကိုအသုံးပြုသည့်အခါတိုင်းသင်သည်ကင်မရာမှတဆင့်စောင့်ကြည့်ခံရသည်ကိုသင်သိပါသလား? တကယ်တော့ဒီကိရိယာများမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကြောင့်လိမ်လည်မှုအမှုများစွာရှိနေပါတယ်။
အဲဒီမှာ စောင့်ကြည့်ကင်မရာများအမြဲတမ်းထားရှိသည့်နေရာများ၊ တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီမှတ်တမ်းတင်ခြင်းစျေးဝယ်စင်တာများ၊ စူပါမားကက်များ၊ ဘဏ်များ၊ အများပြည်သူသုံးလမ်းများနှင့်မြို့ပြရှိအဓိကလမ်းများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။
လောလောဆယ်လူအများစုတွင်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုထားသောလက်ကိုင်ဖုန်းရှိသည်။ ၄ င်းတို့သည်သူတို့၏စောင့်ကြည့်ကင်မရာမှပေးသောပုံရိပ်များကို၎င်းတို့၏အချက်ပြပေးသူပံ့ပိုးပေးသည့် application မှတစ်ဆင့်ရယူနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအတွင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာတို့ကိုအချိန်မှန်မှာလေ့လာပါကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆို။
Surveillance ကင်မရာများသည်သင်၏လုံခြုံရေးစနစ်၏မျက်စိဖြစ်သည်၎င်းတို့သည်မဟာဗျူဟာကျကျတည်ရှိသောအာရုံခံကိရိယာများမှတစ်ဆင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုသိရှိနိုင်သည့်စွမ်းအားရှိသည် အချိန်မီထုံးစံ၌နှိုးဆော်သံကိုသက်ဝင် ၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များအားအချိန်တိုအတွင်းအကြောင်းကြားလိမ့်မည်ဖြစ်သော Movistar Prosegur ကဲ့သို့ဗဟိုတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။
မင်းရဲ့အိမ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုလုံခြုံအောင်ထားဖို့၊ အကောင်းဆုံးစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းတွင်ထိရောက်သောကင်မရာများတပ်ဆင်ထားနိုင်သည် နှင့်လုံလောက်သောလွှမ်းခြုံအနားသတ်နှင့်အတူ။ သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့အပေါ်အခြေခံပြီးသင်၏အကောင်းဆုံးလုံခြုံရေးကင်မရာ၏ရွေးချယ်မှုကိုလမ်းညွှန်ပေးလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်အပူအမျိုးမျိုးကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်သောအမျိုးအစားများကိုတွေ့လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းဗီဒီယိုအရည်အသွေးမှာမူသိပ်မကောင်းပါ။ စဉ်တွင် လွှမ်းခြုံမှုနည်းသောသမားရိုးကျများသည်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ PTZ ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လှုပ်ရှားမှုရှိသောကြောင့်သင်၏ကြည့်မြင်ကွင်းကိုကျယ်ပြန့်စေသည်၊ ၎င်းသည်သင့်အားတိကျသောareasရိယာများကိုထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
ဒါ့အပြင်သင်သတိရသင့်တယ် ၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုထက်ပြားချပ်ချပ်၊, မည်သည့်ကိစ္စတွင်ကျယ်ပြန့်သောလွှမ်းခြုံမှုအာမခံရန်လိုအပ်သောကင်မရာအရေအတွက်ကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဤလုံခြုံရေးစနစ်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအားလုံးပါ ၀ င်ပြီးသင်၏ဗဟိုခံဘူတာနှင့်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်မှုပေးသော Movistar Prosegur Alarmas ကဲ့သို့သောအချက်ပေးကိရိယာများအတွင်းဗွီဒီယိုစောင့်ကြည့်ခြင်းကင်မရာစနစ်များကိုရနိုင်သည်။ သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်နှစ်လျှင် ၃၆၅ ရက်အတွင်းကြည့်ရှုခြင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » သင်၏လုံခြုံရေးကင်မရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မသိသေးသောအရာ (၅) ခု
LG Tone Free HBS-FN7 - ဆူညံသံကိုဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်အခြားအရာများ
Huawei သည် MateBook D 15 laptop အသစ်ကို Intel ချစ်ပ်အသစ်များဖြင့်သက်တမ်းတိုးလိုက်သည်